Oduu durii kana beektuu? -
bilisummaa September 22, 2013	1 Comment
Previous Ethiopia’s Future: Self Rule of Golden Oromia With or Without Shared Rule of Great Oromia
Next Sugar is ‘the most dangerous drug of our time’ and should come with smoking-style health warnings, says Dutch health chief
Qeraansi raafu hin nyaatu dura re’e cesisu. Itti anse qerransa cesisu. Yommu deebi’u re’ee fudhatee debi’a akka hin nyaatamne. Re’e gamanatti dhisani raafu cesisu. Raafu eega cesisani booda re’ee cesisu yeroo lammafaaf. Akkanatti laga cesisu. kana akamitti qabsoo waliin hidhata osoo itti yaadne gaaridha.